Indlu yanamhlanje echibini
Indlu ibekwe kwindawo yolondolozo lwendalo kwintsimi yanamhlanje, ilali egadiweyo ye-cottage (ilali yaseMyshetskoye, isithili saseSolnechnogorsk). Kumgama wokuhamba ukusuka kwindlu, kukho ichibi elikhulu "Round", ihlathi kunye neTempile endala yekhulu le-17. Indlu enoyilo olulula kakhulu kwimigangatho emi-4.
Indlu iye yalungiswa ngokweprojekthi yoyilo lombhali (imibhobho yanamhlanje, imigangatho eshushu, ifenitshala entsha). Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, ikhitshi edibeneyo ngefestile kunye neveranda egqunyiweyo. Iveranda egqunyiweyo, enendawo yomlilo (ikuvumela ukuba ukonwabele ngokukhululekileyo umlilo ovulekileyo kunye ne-barbecue nasebusika). Amagumbi okulala abekwe kumgangatho wesibini nowesithathu. Kumgangatho ongaphantsi kwesakhiwo kukho indawo yokuhlambela kunye negumbi elinamabhiliyoni kunye ne-tennis yetafile, ibhola lebhola.
Indlu yenzelwe abantu abayi-18, indawo yokuhlala etofotofo, yesidlo ukuya kuthi ga kwi-30 yabantu.
I-Wi-fi ihlawulwa ngokwahlukeneyo
Indlu ibekwe kwindawo yolondolozo lwendalo kwintsimi yanamhlanje, ilali egadiweyo ye-cottage (ilali yaseMyshetskoye, isithili saseSolnechnogorsk). Kumgama wokuhamba ukusuka kwindlu, kukho ichibi elikhulu "Round", ihlathi kunye neTempile endala yekhulu le-17. Kude kude nendlu, elunxwemeni lwechibi, kukho indawo yokutyela emangalisayo "Ilali yaseFisherman's".
Ngexesha lokufika, idiphozithi ye-inshurensi ye-ruble ye-10,000 okanye amaxwebhu e-2 ahlawulwa